Iindaba - Ngaba i-carbon fiber iqhekeza ngokulula |I-EWIG
Ngaba i-carbon fiber iqhekeza lula |I-EWIG
I-carbon fiber yinto edibeneyo.Iqulathe iitoni zemiqulu emincinci yemicu edityaniswe kunye ne-epoxy. Ifayibha yekhabhoni yomelele kakhulu xa yoluliwe okanye igobile, kodwa ibuthathaka xa icinezelwe okanye ivezwe kukothuka okukhulu (umz. i-carbon fibre bar inzima kakhulu ukuyigoba, kodwa iyakuqhekeka. ngokulula ukuba ubethwe ngehamile).Ukuqwalasela ukuba aisakhelo se-carbon fiberinokuxhasa ubunzima bomkhweli kunye nayo yonke imikhosi eyongezwayo ngumkhweli (enokuthi idlule ngokuphindwe kaninzi ubunzima bomzimba wabo) ayikho buthathaka nangayiphi na indlela.Konke oku kungaphantsi kobunzima be-aluminium efaniswayo okanye isakhelo sentsimbi.
Kodwa iintlobo ezithile zamandla-njengeempembelelo ezibukhali-zingonakalisa imicu kunye ne-epoxy zenza buthathaka izinto, into engenakwenzeka ngentsimbi.
Ngaphandle koko, Xa yenziwe kakuhle, i-carbon fiber inokuba yomelele kunentsimbi kwaye ikhuseleke kakhulu.Kodwa xa yenziwe ngokungalunganga, amacandelo e-carbon-fiber anokwaphuka ngokulula.Ngokungafaniyo nezinye izixhobo, ukuba uqinisa ngakumbi iinxalenye ze-carbon-fiber, zinokuthi ziqhekeke endleleni.
Ngaba i-carbon Fiber ihlala ixesha elide?
Ifayibha yekhabhon izinzile ngokwekhemikhali, imelana nomhlwa, kwaye ayiyi kuhlwa.Kubalulekile ukuqaphela ukuba i-carbon fiber composites inokubangela i-galvanic corrosion xa idibene nezinye isinyithi.Ngelixa ingayi kukhokelela kukonakala komhlaba kwixesha elifutshane, iimveliso zomhlwa ziyadibanisa kwaye zikhokelela kumonakalo ekuhambeni kwexesha.
Ngaba kubi ukushiya ibhayisekile yekhabhoni elangeni?
Imicu yekhabhoni ichukumiseke kakhulu ekukhanyeni kwelanga.Phantse nakuphi na ukuvezwa kuya kuwanyusa kakhulu amathuba okuba nomhlaza wolusu.Ungaze uvumele ibhayisekile ukuba ibe selangeni elithe ngqo.
Ngaba ibhayisekile ye-carbon fiber inexabiso layo?
Kodwa nangona ifikeleleka ngakumbi kunangaphambili,China carbon fiber ibhayisekile yombaneisabiza kakhulu kunezinye iindlela ezininzi ze-aluminiyam kunye nentsimbi.Ke kwabo bakhangela ibhayisekile babeka esichengeni kwanto kubunzima, ukuphendula okanye ukusebenza, ke ewe, i-carbon fiber iya kuba lolona khetho lubalaseleyo kwiimeko ezininzi.
Ngaba iifreyimu zekhabhoni ziyaqhekeka?
Isiphene soyilo kunye neengxaki zokwenziwa kwemveliso ziye zakhokelela ekusileleni okuyingozi ngequbuliso ngelixa ukhwele.Ikhabhoni ayiphuhlisi iintanda ezincinci ezinokungaphumeleli kamva njengentsimbi okanye isakhelo sengxubevange, ngokwemvelo iyimathiriyeli edibeneyo.
Inkqubo ye-carbon fiber iyinkimbinkimbi, kwaye amandla ahambelana nemodyuli yelaphu lekhabhoni kunye nenkqubo yokubumba kunye nobukhulu.Ngokuqhelekileyo, iisakhelo sekhabhoni yomzi-mvelisoakulula ukuphuka, kwaye iimpawu zesakhelo sekhabhoni zinokumelana noxinzelelo lomphezulu kodwa azikwazi ukumelana nenqaku.Ngoko ke, ukuba isakhelo sekhabhoni siwela phantsi, kuya kuba ne-lacquer kuphela, kwaye ukuba i-tip yamatye ibethelwe, kuya kubakho umngcipheko wokuphuka, kodwa ngokubanzi kuya kuba namandla kunesakhelo se-aluminium jikelele.
Kutheni i-carbon fiber iphuka ngokulula?
I-carbon fiber tube ayilula ukuphuka, oko akuthethi ukuba ayiyi kuphuka.Iimfuno zokusetyenziswa kwemizi-mveliso yeetyhubhu ze-carbon fiber ziphezulu kakhulu kunezo zokusetyenziswa kwansuku zonke, kwaye amathuba okuphuka nawo aphezulu.Amandla aveliswa zizixhobo zamashishini aphezulu kakhulu kunamandla ezandla zethu.Ukuba awulumkanga, ityhubhu ye-carbon fiber inokuchithwa ngokupheleleyo.Ukwaphulwa kwetyhubhu ye-carbon fiber inxulumene nesiphene sayo kunye nomthwalo ogqithise kakhulu umthwalo.
Ityhubhu ye-carbon fibre yenziwe nge-carbon fiber prepreg, kwaye i-carbon fibre prepreg ngokwayo iyoyika ukugqojozwa ngezinto ezibukhali.Amacandelo e-carbon fiber prepreg yimisonto ye-carbon fiber kunye nezixhobo ze-resin.Ubunzima be-resin ngokwayo abukho phezulu.Undoqo wepuncture kukufumana uxinzelelo olukhulu kwindawo encinci.Ngoko ke, xa ityhubhu ye-carbon fiber idibana nento ebukhali, Kuya kubakho ukuhlukana.
Ukongezelela, ukunyanzeliswa kwe-carbon fiber tube ayiphezulu, kwaye ukungqubuzana kwexesha elide lendawo kuya kubangela ukugqoka ngokugqithiseleyo.Emva koxinzelelo, kuya kuphinda kuphuke.
Iifreyimu zebhayisekile zekhabhoni zebhayisekile ziya zithandwa ngakumbi emarikeni njengoko zifumaneka ngokubanzi, kwaye zilungile kwabo bakuhlahlo lwabiwo-mali.
Ezi bhayisekile zenziwe ngomxube phakathi kwe-carbon fiber kunye ne-resin, kwaye zidume ngokomelela kunye nokuqina kwazo.Nangona kunjalo, usenokuba uyazibuza ukuba iya kuhlala ixesha elingakanani ibhayisekile ye-carbon fiber?Ngokukodwa xa kuthelekiswa nebhayisekile yentsimbi yemveli?
Into yokugqibela ofuna ukuyenza kukuchitha imali kwibhayisekile entsha ukuze ufumanise ukuba ayibambeki ekuhambeni kwexesha njengoko ubucinga ukuba iya kuba njalo.Yiyo loo nto kubaluleke kakhulu ukuba wenze uphando lwakho ngaphambi kokuba uqhubeke kwaye wenze isigqibo.
Ngombulelo, siza kukuxhobisa ngalo lonke ulwazi oludingayo ukuze wenze isigqibo esilungileyo.Kweli nqaku, unokufumana okungakumbi malunga nobomi beshelufu yebhayisiki ye-carbon fiber, kunye nendlela abakwazi ngayo ukuma uvavanyo lwexesha.
Iibhayisekile zeCarbon fiberaziyi kwaphuka lula ngenxa yezinto ezomeleleyo ezisetyenziswa ukuzenza.Iibhayisekile zekhabhoni zefiber zihlala ziphuhliswa kwaye ziphuculwa njengoko ixesha lihamba, kwaye ukuqhubela phambili kobugcisa kwi-weave kunye ne-epoxy kwenzeka ukuze kuqinisekiswe ukuba izinto ezisemgangathweni zisetyenziselwa ukwenza.Ezi freyimu zebhayisikili zenzelwe kwaye zakhiwe ngendlela eqinisekisa ukuba kukho amandla kwiindawo zesakhelo apho zifuneka kakhulu.Ke, ikhabhoni ingasetyenziselwa ukwenza isakhelo sebhayisekile esomeleleyo esingayi kwaphuka lula.
Kanye noku, iifreyimu zebhayisiki zekhabhoni zebhayisekile ziye zangqinwa ukuba zigqithise ialloy kuvavanyo lwelebhu, kwaye unokufumana uluhlu lweebhayisekile zekhabhoni ezinefuthe elikhulu lokuchasa.
Enyanisweni, iimpazamo ezinkulu kunye nokuqhekeka okwenzeka kwiibhayisiki zekhabhoni azinanto yakwenza nebhayisekile kwaphela, kwaye uninzi lwazo luphantsi kwempazamo yomsebenzisi.Yiyo loo nto kubaluleke kakhulu ukuba uyinakekele kwaye uyigcine ngokufanelekileyo ibhayisekile yakho.
funda ngakumbi malunga neemveliso ze-Ewig
ibhayisekile yebhayisekile yebhayisekile yefiber yombane
carbon fiber yombane ibhayisekile entabeni
Funda ngakumbi iindaba
owenza eyona isakhelo sebhayisekile yekhabhoni
indlela yokulungisa isakhelo sebhayisiki yekhabhoni
Indlela yokwenza isakhelo sebhayisekile ye-carbon fiber
Ixesha lokuposa: Dec-25-2021
uyigcina njani ibhayisekile esongwayo|I-EWIG
wazi njani ukuba ibhayisekile esongwayo ilungile |...